ပုဂံမြေ မြင်းက ပါရွာက ကျိန်စာ သင့်သူ (ဖြစ် ရပ် မှန်) – Let Pan Daily
တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ်… ဒီရွှေတွေငွေတွေ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေက ဘုရား ဌာပနာတိုက်ကနေ ပေါက်ထွက်လာ တာတဲ့ …. ၊ စေတီပြို ၊ စေတီပျက်တွေထဲကနေ ငလျက်ဒဏ်ကြောင့် မြေကြီးထဲကိုရောက်ပြီး မြေလွှာအလိုက် ရွေ့လာ တဲ့ ရတနာတွေတဲ့ …. ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာက ရှေးလူတွေ ၀ှက်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ မဟုတ်ရင် ဘုရားဌာပနာတွေပဲ…. ၊ ခေတ်ကာလကလည်း အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံးအထိ အာဏာမရောက်နိုင်သေး တော့ ဒီလိုတိူးလို့ရလာတဲ့ရတနာတွေကိုလည်း သိမ်းတာဆည်းတာ ဖမ်းတာတွေ မရှိဘူး ၊ ကိုယ့်ခြံထဲမှာတွေ့တာ ကိုယ်ပိုင်တာပဲလို့သတ်မှတ်ပြီး သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ နေနေကြတဲ့သူတွေကများတယ်… ၊
“ဗျို့ နောင်ကြီး ” “ ခင်ဗျာ…ကျွန်တော့်ကိုခေါ်တာလားဗျာ ” စိန်တိုး တစ်ယောက်တည်း ရန်ကုန်ဘူတာကြီးနားမှာ ယောင်ပေပေနဲ့ ဟိုကြီးဒီကြည့် လုပ်နေတုန်း အတော်လေးသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့ သူဌေးရှုံးလောက်အောင် ဝတ်ဆင် ထားတဲ့ မျက်နာစိမ်းတစ်ယောက်က တော်တော်လေးနားဝင်ချို ဖော်ရွေတဲ့လေသံနဲ့ စပြီး မိတ်ဖွဲ့လာတယ် ၊ ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားမို့ စကားကိုချိန်ပြောရမှန်းလည်းမသိ ၊ လူတိုင်းကိုမယုံရမှန်းလည်းမသိနဲ့ စိန်တိုးတစ်ယောက် သူ အမွေရထားတဲ့ ရွှေထည် ၊ ကျောက်ထည်တွေ တစ်ချို့ကို ဈေးများများရတဲ့ဆီမှာ ရောင်းချင်ပြီး ငွေကိုလက်ငင်းလိုချင်တဲ့ အကြောင်း ၊ လက် ရှိ ရန်ကုန်မှာ နေစရာလေးတစ်ခုကိုဝယ်ချင်တဲ့အကြောင်း ၊ လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကို စပြီးလုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းတွေပြောပြလိုက်တော့ လူစိမ်းက အတော်လေးမျက်နာပွင့်သွားပြီး
ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ သန်းမြင့်လှိုင်က အတော်လေး မျက်လုံးမျက်စံပြုးသွားပြီး စိန်တိုးပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင်း မယုံသလိုနဲ့ “ ဒါ ခင်ဗျားတို့ ဘိုးဘွားပိုင်တာဟုတ်..ဟုတ်…ဟုတ်ပါတယ်နော် ” စိန်တိုးကလည်း လိမ်တာကို သိသွားမှာစိုးလို့ စကားနည်းနည်းထစ်သွားပြီး “ ဟာ..ဟုတ်..ဟုတ်.ပါတယ်ဗျ…ဘာလဲ့ ကျုပ်ကလိမ်ပြောရမှာလား.. ကဲပြော ကျုပ်ကိုဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ…တောသားဆိုပြီးဈေးနှိုမ်မယ်တော့မကြံနဲ့နော် ကျုပ်ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးကို တစ်ခြားမှာလည်းစုံစမ်းလာခဲ့ပြီးသား…. ” လောဘရဲ့အရှိန်တွေကြောင့် စိန်တိုး ပြောမိပြောရာတင်းပြောလိုက်မိတယ် တစ်ဖက်က ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း အမှန်တကယ်ကိုသဘောကျသွားပြီး စိန်တိုးပေးတဲ့ ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်လက်စားတွေကို ပေါက်ဈေးထက် သုံးပုံပုံ တစ်ပုံစာကို လျော့ပြီး စိန်တိုးကို ပေးလိုက်တယ်… ၊ ဒီလိုလျော့ထားပေမယ့်လည်း ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင် ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေပုံကြီးက စိန်တိုးတစ်သက် တစ်ကြိမ်မှ မမြင်ဖူးတဲ့ငွေတွေမို့ တစ်ချက်မငြင်းတော့ဘဲ ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တယ် ၊
စိန်တိုးရဲ့လက်ကို ဇနီးသည်က ရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါ ဇနီးကိုသိပ်ချစ်တဲ့ စိန်တိုးကအပြစ်မဆိုဘဲ ပြုံးထားရင်း သူ့ကလေး တွေကို ၀အောင်နမ်းလိုက်တယ် နမ်းနေတုန်းမှာပဲ ဇနီးလုပ် တဲ့သူက အိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်…ရှက်တယ်ဆိုပြီး အထုတ်တွေ ဆွဲပြီး အဝတ်တွေထည့်နေတယ် ၊ စိန်တိုးကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘဲ အိမ်အပေါ်ကိုပြေးတက်သွား လိုက်တယ်… ၊ ခဏလေးကြာတော့ အိမ်ပေါ်ကနေ “ဝုန်း” ဆိုတဲ့ အသံကြီးကိုလူတိုင်းကြားလိုက်ရလို့ အံ့သြသွားပြီး ပြေးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အိမ်ပေါ်မှာ လည်ပင်းကြိုးကွင်းတန်းလန်းကြီးနဲ့ သေနေတဲ့ စိန်တိုးနဲ့အတူ သူကြိုးဆွဲချ ခါနီး ခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ ခွေးခြေအပုလေးတစ်ခုံးကို လဲလျက်သားလေးမြင်လိုက်ရတယ်.. ၊
သှားရငျး လာရငျး ဒီနိမိတျတှေ မွငျရငျ သငျ ကံကောငျးပွီ!!!